ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကို တစ်ယောက်ထဲ တက်သွားပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ နောက်ဇာတ်ကြောင်း - Myitter
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကို တစ်ယောက်ထဲ တက်သွားပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ နောက်ဇာတ်ကြောင်း
June 27, 2020 Myitter Uncategorized 0
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကို တစ်ယောက်ထဲတက်သွားပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကောင်မလေး ဇာခြည်မြင့်မြတ် နောက်ဆုံး
ပျောက်တဲ့မနက် (၂၅-၆-၂၀၂၀) မနက်ဘက် ရန်ကုန်မှာရှိနေရာကနေ မိသားစုနဲ့အတူ ကားနဲ့ပြန်လာပါတယ်။ဘားအံကို နေ့လည်မှာရောက်ရှိပါတယ်။ဘားအံတက္ကသိုလ်မှာ ဂုဏ်ထူးတန်း ပထမနှစ်တက်နေတဲ့ အဆောင်နေ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။
သူမမှာစိတ်ညစ်စရာ မိသားစုပြသာနာရှိပါတယ်။အစကတော့ မရေးပြ မပြောပြတော့ဘူးလို့ထားပေမယ့် သို့လော သို့လောနဲ့ အများထင်နေပြီး ဟိုမှာဘယ်လိုတွေ့တယ် ဒီမှာဘယ်လိုတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ comment တွေကို screen shot ရိုက်ရင်း ပျံ့နှံ့နေတာမို့ အနည်းငယ် အသိပေးရချင်းပါ။
အဲ့ဒီနေ့ ရန်ကုန်ကပြန်အလာ သင်တန်းတစ်ခုတက်တာ နေ့လည် (၂) နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာ ပြီးပါတယ်။သူ့သူငယ်ချင်းကို မတက်ခင်ညကတောင်တက်ဖို့ခေါ်တယ်။
(သူ့သူငယ်ချင်းမေးတာ)=>Tg paw Ko bar Tat lote my II May Tok)
(သူပြန်ဖြေတာ) => I wall do.I can’t live anymore lh pyn phay tl
သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ပြီး မုန့်စားချိန် သူငိုဝမ်းနည်းပြီးငိုတယ်။သူ့သူငယ်ချင်းကို လိမ်လိမ်မာမာနေဖို့မှာသွားတယ်။မုန့်အတူစားကြပါသေးတယ်။
သူနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းကို ဇွဲကပင်တက်ဖို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့သူငယ်ချင်းက မလိုက်တော့ သူပဲ တစ်ယောက်ထဲပဲတက်သွားပါတယ်။(သူ့သူငယ်ချင်းကို အရင်အခါတွေက အဆုံးစီရင်ဖို့ ၂ ခါရင်ဖွင့်ဖူးတယ်။သူ့သူငယ်ချင်းတွေက ဖြောင်းဖြလို့ သူအဲ့ဒီအခါတွေက မလုပ်ခဲ့ဘူး)
သူမနေ့ညနေက ဇွဲကပင်အနောက်ဘက်ခြမ်း လုဗ္မိနီဥယျဉ်ဘက်နေ အလှူခံဌာနမှာ ငွေ (၅၀၀၀) လှူပြီး တောင်ပေါ်ကိုတက်ပါတယ်။
အထက်ရေတံခွန်နားမှာ သူစီးသွားတဲ့ ဖိနပ်ကို ချွတ်ထားလျှက် တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်မလေးစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကို တောင်ခြေက ဆိုင်ကယ်အပ်တဲ့ဌာနမှာ အပ်ခဲ့ပါတယ်။(မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ရင်းတွေ့ရတာပါ။)
ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ Drone နဲ့ထပ်မံတက်ရှာပေမယ့် drone သေးနေပြီး အပင်များရှိတာကြောင့် ရှာဖွေမရပါဘူး။
ညနေ ၃:၃၀ အချိန်မှာ ဇွဲကပင်တောင်အမြဲတက်နေတဲ့ သူများမှာ ဇွဲကပင်တောင်စေတီအနီး ကရင်မောင်နှမနတ်နန်းအပေါ်ဘက်ခြမ်း ရေကန်အနီး ကျောက်ကမ်းပါးအကွေ့ ကျောက်စွန်းရဲ့ ကျောက်(၂) လုံးကြားမှာတွေ့ပါတယ်။
သူ့အမေက သူ့သမီးဆိုင်ကယ်သော့ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါတယ်။(ဆိုင်ကယ်သော့တွေ့တာ တောင်အမြဲတက်နေတဲ့ အနီးအနားကျေးရွာက ရွာသားတစ်ယောက်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သော့တွေ့သူကိုယ်တိုင် နောက်တစ်ခါဇွဲကပင်တောင်ကို ချက်ချင်းပြန်တက်ပြီး နေရာအမှတ်အသားပြသပေးခြင်းနဲ့တခြားလိုအပ်တာတွေကို အပင်ပန်းခံကူညီပေးသွားပါတယ်။)
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ် နိုင်ငံခြားသားခုန်ချခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်သာခေါင်းမိုးပေါ်မှာ ကောင်မလေးကို တွေ့လို့ ဦးဇင်းတစ်ပါးကအော်ဟစ်သတိပေးမှ ပြန်ဆင်းလာတယ်လို့ တောင်ပေါ်မှ ဦးဇင်းတွေပြောပါတယ်။
ဇွဲကပင်တောင်အရှေ့ဘက်ခြမ်းကနေ ကောင်မလေးကို ကောင်လေးတစ်ယောက်လာခေါ်သွားတယ်ဆိုတာ အတည်ပြုမရပါ။
မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ မြို့မှစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ကောင်မလေးသူငယ်ချင်းများ အဲ့ဒီကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကောင်လေးလာခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အတည်ပြုချက်မျိုး အမျိုးမျိုးသွားမေးသော်လဲ အတည်ပြုမရခဲ့ပါ။
လူခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကွာဟနေခြင်း(ပိန်တာ/ဝတာ ကို ဆိုလိုတာပါ)မွန်ပြည်နယ်ဘက်က ဇွဲကပင်လာတက်တဲ့ စုံတွဲဖြစ်နေခြင်း မွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများပြောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတို့ကြောင့် အမျိုးမျိုးစုံစမ်းပြီး သတင်းအမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပေးရပါတယ်။
1 – ကောင်မလေးဟာ ဇွဲကပင်တောင်မတက်ခင် မိသားစုပြသာနာကြောင့် စိတ်တအားထိခိုက်နေပါတယ်။(သူ့မိခင်ပြောပြချက်အရ သူဟာ မိသားစုနဲ့ သူ့အစ်ကိုကို အရမ်းချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ စိတ်ထိခိုက်နေပါတယ်)
2 – ကောင်မလေးမှာ ချစ်သူ ရည်းစား လုံးဝမရှိပါ။သူ့နဲ့အနီးဆုံးနေသည့် မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများစွာကိုရော သေချာမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီခေတ်ကလဲ ရည်းစားသာမက Ex ရှိခဲ့ရင်တောင် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်သိနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။သူ့ Facebook အကောင့် Gmail ထဲမှာအချက်အလက်တွေကိုရော ရှာဖွေစစ်ဆေးချက်များအရ လုံးဝ ချစ်သူ ရည်းစား မရှိပါ။
3 – ကောင်မလေးရဲ့ နောက်ဆုံးပို့တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံး massage က သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
အခုဆိုရင် ပျောက်ဆုံးနေတာ နာရီ(၄၀) ပြည့်ပါပြီ။
နောက်ဆုံး DB ကို ဘားအံရင်ခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ထား။
Tin Htoo Wai
ဇှဲကပငျတောငျပျေါကို တဈယောကျထဲတကျသှားပွီး ပြောကျဆုံးနတေဲ့ ကောငျမလေး ဇာခွညျမွငျ့မွတျ နောကျဆုံး
ပြောကျတဲ့မနကျ (၂၅-၆-၂၀၂၀) မနကျဘကျ ရနျကုနျမှာရှိနရောကနေ မိသားစုနဲ့အတူ ကားနဲ့ပွနျလာပါတယျ။ဘားအံကို နလေ့ညျမှာရောကျရှိပါတယျ။ဘားအံတက်ကသိုလျမှာ ဂုဏျထူးတနျး ပထမနှဈတကျနတေဲ့ အဆောငျနေ အသကျ ၂၀ ဝနျးကငျြ ကြောငျးသူတဈယောကျပါ။
သူမမှာစိတျညဈစရာ မိသားစုပွသာနာရှိပါတယျ။အစကတော့ မရေးပွ မပွောပွတော့ဘူးလို့ထားပမေယျ့ သို့လော သို့လောနဲ့ အမြားထငျနပွေီး ဟိုမှာဘယျလိုတှတေ့ယျ ဒီမှာဘယျလိုတှတေ့ယျဆိုတဲ့ comment တှကေို screen shot ရိုကျရငျး ပြံ့နှံ့နတောမို့ အနညျးငယျ အသိပေးရခငျြးပါ။
အဲ့ဒီနေ့ ရနျကုနျကပွနျအလာ သငျတနျးတဈခုတကျတာ နလေ့ညျ (၂) နာရီကြျောကြျောလောကျမှာ ပွီးပါတယျ။သူ့သူငယျခငျြးကို မတကျခငျညကတောငျတကျဖို့ချေါတယျ။
(သူ့သူငယျခငျြးမေးတာ)=>Tg paw Ko bar Tat lote my II May Tok)
(သူပွနျဖွတော) => I wall do.I can’t live anymore lh pyn phay tl
သူ့သူငယျခငျြးနဲ့ နောကျဆုံးတှပွေီ့း မုနျ့စားခြိနျ သူငိုဝမျးနညျးပွီးငိုတယျ။သူ့သူငယျခငျြးကို လိမျလိမျမာမာနဖေို့မှာသှားတယျ။မုနျ့အတူစားကွပါသေးတယျ။
သူနဲ့အတူ သူငယျခငျြးကို ဇှဲကပငျတကျဖို့ချေါပါတယျ။သူ့သူငယျခငျြးက မလိုကျတော့ သူပဲ တဈယောကျထဲပဲတကျသှားပါတယျ။(သူ့သူငယျခငျြးကို အရငျအခါတှကေ အဆုံးစီရငျဖို့ ၂ ခါရငျဖှငျ့ဖူးတယျ။သူ့သူငယျခငျြးတှကေ ဖွောငျးဖွလို့ သူအဲ့ဒီအခါတှကေ မလုပျခဲ့ဘူး)
သူမနညေ့နကေ ဇှဲကပငျအနောကျဘကျခွမျး လုဗ်မိနီဥယဉျြဘကျနေ အလှူခံဌာနမှာ ငှေ (၅၀၀၀) လှူပွီး တောငျပျေါကိုတကျပါတယျ။
အထကျရတေံခှနျနားမှာ သူစီးသှားတဲ့ ဖိနပျကို ခြှတျထားလြှကျ တှရှေိ့ရပါတယျ။ကောငျမလေးစီးလာတဲ့ဆိုငျကယျကို တောငျခွကေ ဆိုငျကယျအပျတဲ့ဌာနမှာ အပျခဲ့ပါတယျ။(မီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျမြားမှာ ရှာဖှကေယျဆယျရေးလုပျရငျးတှရေ့တာပါ။)
ရဲတပျဖှဲ့မှာ Drone နဲ့ထပျမံတကျရှာပမေယျ့ drone သေးနပွေီး အပငျမြားရှိတာကွောငျ့ ရှာဖှမေရပါဘူး။
ညနေ ၃:၃၀ အခြိနျမှာ ဇှဲကပငျတောငျအမွဲတကျနတေဲ့ သူမြားမှာ ဇှဲကပငျတောငျစတေီအနီး ကရငျမောငျနှမနတျနနျးအပျေါဘကျခွမျး ရကေနျအနီး ကြောကျကမျးပါးအကှေ့ ကြောကျစှနျးရဲ့ ကြောကျ(၂) လုံးကွားမှာတှပေ့ါတယျ။
သူ့အမကေ သူ့သမီးဆိုငျကယျသော့ဖွဈကွောငျး အတညျပွုပါတယျ။(ဆိုငျကယျသော့တှတေ့ာ တောငျအမွဲတကျနတေဲ့ အနီးအနားကြေးရှာက ရှာသားတဈယောကျတှခေဲ့တာဖွဈပွီး သော့တှသေူ့ကိုယျတိုငျ နောကျတဈခါဇှဲကပငျတောငျကို ခကျြခငျြးပွနျတကျပွီး နရောအမှတျအသားပွသပေးခွငျးနဲ့တခွားလိုအပျတာတှကေို အပငျပနျးခံကူညီပေးသှားပါတယျ။)
ဇှဲကပငျတောငျပျေါ နိုငျငံခွားသားခုနျခခြဲ့ဖူးတဲ့ အိမျသာခေါငျးမိုးပျေါမှာ ကောငျမလေးကို တှလေို့ ဦးဇငျးတဈပါးကအျောဟဈသတိပေးမှ ပွနျဆငျးလာတယျလို့ တောငျပျေါမှ ဦးဇငျးတှပွေောပါတယျ။
ဇှဲကပငျတောငျအရှဘေ့ကျခွမျးကနေ ကောငျမလေးကို ကောငျလေးတဈယောကျလာချေါသှားတယျဆိုတာ အတညျပွုမရပါ။
မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား ၊ မွို့မှစခနျးမှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား ၊ကောငျမလေးသူငယျခငျြးမြား အဲ့ဒီကောငျမလေးတဈယောကျကို ကောငျလေးလာချေါသှားတယျဆိုတဲ့ အတညျပွုခကျြမြိုး အမြိုးမြိုးသှားမေးသျောလဲ အတညျပွုမရခဲ့ပါ။
လူခန်ဓာကိုယျပုံစံကှာဟနခွေငျး(ပိနျတာ/ဝတာ ကို ဆိုလိုတာပါ)မှနျပွညျနယျဘကျက ဇှဲကပငျလာတကျတဲ့ စုံတှဲဖွဈနခွေငျး မှနျတိုငျးရငျးသားဘာသာစကားမြားပွောသှားတဲ့ပုံစံမြိုးတို့ကွောငျ့ အမြိုးမြိုးစုံစမျးပွီး သတငျးအမှားတဈခုဖွဈကွောငျး အတညျပွုပေးရပါတယျ။
1 – ကောငျမလေးဟာ ဇှဲကပငျတောငျမတကျခငျ မိသားစုပွသာနာကွောငျ့ စိတျတအားထိခိုကျနပေါတယျ။(သူ့မိခငျပွောပွခကျြအရ သူဟာ မိသားစုနဲ့ သူ့အဈကိုကို အရမျးခဈြတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး အဲ့ဒီကိစ်စတှနေဲ့ စိတျထိခိုကျနပေါတယျ)
2 – ကောငျမလေးမှာ ခဈြသူ ရညျးစား လုံးဝမရှိပါ။သူ့နဲ့အနီးဆုံးနသေညျ့ မိနျးကလေးသူငယျခငျြးမြားစှာကိုရော သခြောမေးမွနျးခဲ့ပါတယျ။
ဒီခတျေကလဲ ရညျးစားသာမက Ex ရှိခဲ့ရငျတောငျ ဘယျလိုဖွဈဖွဈသိနိုငျတဲ့ အခွအေနမြေိုးပါ။သူ့ Facebook အကောငျ့ Gmail ထဲမှာအခကျြအလကျတှကေိုရော ရှာဖှစေဈဆေးခကျြမြားအရ လုံးဝ ခဈြသူ ရညျးစား မရှိပါ။
3 – ကောငျမလေးရဲ့ နောကျဆုံးပို့တဲ့ အင်ျဂလိပျစာလုံး massage က သံသယဖွဈဖှယျရာ တှရှေိ့ရပါတယျ။
အခုဆိုရငျ ပြောကျဆုံးနတော နာရီ(၄၀) ပွညျ့ပါပွီ။
နောကျဆုံး DB ကို ဘားအံရငျခှဲရုံကိုပို့ဆောငျထား။
ဝမ်းနည်းစရာသတင်းပါ စာရေးဆရာ နွမ်ဂျာသိုင်း ယနေ့နေလည်ကကွယ်လွန်သွားပါပြီ . . .
ဇှဲကပငျတောငျပျေါမှ တက်ကသိုလျကြောငျးသူ ရုပျအလောငျးကို သယျဆောငျနိုငျခဲ့ပါပွီ . . .
ကြောငျးသူမလေး အလောငျးကို ကယျဆယျရေးအဖှဲ့တှေ တောငျအောကျဆငျးပွီး သှားဆညျယူနတေဲ့ (ရုပျ/သံ) . . .
ဖုန်းဘေလ် ခိုးနေတဲ့ ဖုန်းအော်ပရေတာ ကုမ္ပဏီတွေကို လွှတ်တော်က တရားစွဲတော့မည် . . .